यी तीन विषयमा अड्कियो वाम एकता, अब के होला ? | Rajmarga
यी तीन विषयमा अड्कियो वाम एकता, अब के होला ?
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणअघि नै गर्ने भनिएको एमाले र माओवादी एकता लम्बिएको छ ।
राजनीतिक र सांगठनिक तथा विधान कार्यदलले प्रतिवेदन टुंग्याइसके पनि तीन विषयमा तत्काल गाँठो फुक्ने स्थिति नदेखिएपछि एकता घोषणाको तयारी लम्बिएको हो । तीनवटै विषय गम्भीर र आपसमा जेलिएका कारण दुवै दल गृहकार्यविना तत्काल एकता घोषणाको मिति टुंग्याइहाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
सहमति जुट्न नसकेका विषयमा छलफल गर्न आज(मंगलबार) एकता संयोजन समितिको बैठक बस्दै छ । ‘बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गरिसकेपछि आवश्यक विषयमा कार्यदल सदस्यसहितको उपस्थितिमा छलफल हुन्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सकेसम्म मंगलबार नै टुंग्याउने प्रयास गर्छौं, टुंगिएन भने छलफल हुँदै जान्छ ।’
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि तल्लो तहसम्म दुवै पार्टीबाट सहभागिताको अनुपात, चुनाव चिह्न र जनयुद्ध शब्द टुंगो लाग्न बाँकी छ । ‘तीनवटै विषय धेरै महत्वपूर्ण छन्, आपसमा जेलिएका पनि छन्, त्यसैले पार्टी एकता संयोजन समितिबाटै टुंगो लगाउने गरी प्रतिवेदन बुझाइने निर्णय भएको छ,’ संगठन तथा विधानसम्बन्धी कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले भने । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले कार्यदलबाट सम्भव नहुने भन्दै टुंगिन बाँकी तीनवटै विषय राखेर प्रतिवेदन बुझाउँदा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए । थापाको प्रस्तावप्रति एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि सहमति जनाएका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ९ वैशाख ०७५ मा (२२ अप्रिल)मा दुई पार्टीबीच एकता घोषणासभा गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘सकेसम्म मंगलबार नै टुंग्याउने प्रयास हुन्छ, टुंगिएन भने छलफल हुँदै जान्छ, तर ९ वैशाखमा दुवै पार्टी एक भएको घोषणा हुनेछ,’ गौतमले भने ।
कार्यदलमा केन्द्रीय कमिटी २ सय ९९ सदस्यीयसहित दशवटै तहका कमिटीहरूको संख्या टुंगिएको छ । तर, दुई पार्टीबाट कति–कति प्रतिशत अनुपातमा सहभागिता रहने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । यद्यपि, दुवै पार्टीका नेताहरूले एकतामा नीति, सिद्धान्त र लक्ष्य महत्वपूर्ण रहेकाले कसको कति प्रतिशत सहभागिता ठूलो नहुने बताउँदै आएका छन् । एमाले माओवादीको जनमत र निर्वाचनमा बाँडिएको सिटलाई ध्यान दिँदै अनुपात मिलाउने पक्षमा छ । तर, माओवादी भने त्यसरी जाँदा विलयको अर्थ लाग्ने भन्दै समानतालाई आधार मान्नुपर्ने भन्दै बढीभन्दा बढी हिस्सा लिने रणनीतिमा देखिन्छ ।
विधान मस्यौदाको सुरुकै प्रस्तावनामा ‘जनआन्दोलन र जनक्रान्तिका उपलब्धि’ लेखिए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन । ‘जनक्रान्ति’ लेखिसकेपछि ‘जनयुद्ध’को भाव समेट्ने एमालेको अडान छ भने माओवादीले ‘जनयुद्ध’ शब्द नै राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।
माओवादी नेताहरूले सूर्यभित्र हँसिया–हथौडा राखेर चुनाव चिह्न बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, एमाले नेताहरूले भने सूर्य चिह्न मात्रै राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । ०४८ देखि जनस्तरमा परिचित भएकाले सूर्य चिह्न प्रभावकारी हुने एमालेको तर्क छ ।
उपयुक्त समयमा एकता : प्रधानमन्त्री
अहिले भारत भ्रमणअघि कि पछि एकता ? एकता ढिलो भयो जस्ता चर्चा चलिरहेको छ । एकता प्रक्रियाबाट हुने हो, अघि पनि हुन सक्छ, पछि पनि हुन सक्छ । उपयुक्त ढंगले उपयुक्त समयमै हुन्छ, छिटो–ढिलो भन्ने हुँदैन,’ सोमबार मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
Previous post: नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा भारतको खुला समर्थन
Next post: तपाईलाई थाहा छ कस्को तस्वीर बढी हेरिन्छ ? यस्तो रहेछ महिलाकै तस्वीर बढी हेरिनुको कारण